မနက်ဖြန် (၁၆) ရက်နေ့တွင် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း အဆင့်သို့ရောက် ရှိနိုင် . . . – Let Pan Daily
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၁၅)ရက်နေ့ညနေ (၄:၀၀)နာရီ အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အ‌ခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၃:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး..။
ပိုမိုအားကောင်းလာကာ ယနေ့ညပိုင်း တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း၌ မုန်တိုင်းငယ်(Depression)အဆင့်သို့ လည်းကောင်း၊
(၁၆.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း (Cyclonic Storm)အဆင့်သို့ လည်းကောင်း ရောက်ရှိနိုင်ပါသည် ။
အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် မုန်တိုင်းငယ် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ ကနဦးတွင် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျား ပြီး၊
(၁၇.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက် သို့ကွေ့ကာ၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းသို့ ရွေ့လျားနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည် ။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင် တိမ်ထူထပ်နေပြီး၊ ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်နှင့် ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် တိမ်အနည်းငယ် မှ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည် ။
မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တွင် နေရာ ကျဲကျဲနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်..၊
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်..။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လှိုင်း အမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၅)ပေမှ (၇)ပေ ခန့် ရှိနိုင်ပါသည်
နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင် ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်..။
တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက် အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်..။
မန္တလေးမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိ ခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၆၀) ဖြစ်ပါသည် ။
လာမည့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်များအတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်။ နေပြည်တော်တွင် တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းပြီး၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည် ။
မနကျဖွနျ (၁၆) ရကျနတှေ့ငျ ဆိုငျကလုနျး မုနျတိုငျး အဆငျ့သို့ရောကျ ရှိနိုငျ . . .
(၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ မလေ (၁၅)ရကျနညေ့နေ (၄:၀၀)နာရီ အခြိနျ ထုတျပွနျခကျြ)
ဘင်ျဂလားပငျလယျအျော အ‌ခွအေနေ။ ယနမွေ့နျမာစံတျောခြိနျ (၁၃:၃၀)နာရီအခြိနျ တိုငျးထှာခကျြမြားအရဘင်ျဂလားပငျလယျအျောအရှတေ့ောငျပိုငျးတှငျ ဖွဈပျေါနသေော လဖေိအားနညျးရပျဝနျးသညျ ဆကျလကျတညျရှိနပွေီး..။
ပိုမိုအားကောငျးလာကာ ယနညေ့ပိုငျး တှငျ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတောငျပိုငျး၌ မုနျတိုငျးငယျ(Depression)အဆငျ့သို့ လညျးကောငျး၊
(၁၆.၅.၂၀၂၀)ရကျနေ့ ညပိုငျးတှငျ ဆိုငျကလုနျး မုနျတိုငျး (Cyclonic Storm)အဆငျ့သို့ လညျးကောငျး ရောကျရှိနိုငျပါသညျ ။
အဆိုပါ လဖေိအားနညျးရပျဝနျးသညျ မုနျတိုငျးငယျ အဆငျ့သို့ ရောကျရှိပွီးနောကျ၊ ကနဦးတှငျ အနောကျမွောကျဘကျသို့ ရှလြေ့ား ပွီး၊
(၁၇.၅.၂၀၂၀)ရကျနေ့ နောကျပိုငျးတှငျ မွောကျ-အရှမွေ့ောကျဘကျ သို့ကှကေ့ာ၊ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောမွောကျပိုငျးသို့ ရှလြေ့ားနိုငျသညျဟု ခနျ့မှနျးရပါသညျ ။
ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတောငျပိုငျးတှငျ တိမျထူထပျနပွေီး၊ ကပ်ပလီ ပငျလယျပွငျနှငျ့ ကနျြဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတို့တှငျ တိမျအနညျးငယျ မှ တိမျအသငျ့အတငျ့ ဖွဈထှနျးနပေါသညျ ။
မနကျဖွနျနံနကျအထိခနျ့မှနျးခကျြ။ ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျပိုငျး)တှငျ နရော ကြဲကြဲနှငျ့ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မကှေးတိုငျး ဒသေကွီး၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရနျကုနျ တိုငျးဒသေကွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကခငျြပွညျနယျ..၊
ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျးနှငျ့ အရှပေို့ငျး)၊ ခငျြးပွညျနယျ၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျ တို့တှငျ နရောကှကျကြား မိုးထဈခြုနျးရှာမညျ။ ရှာရနျရာနှုနျး(၈၀) ဖွဈပါသညျ။
ကနျြတိုငျးဒသေကွီး နှငျ့ ပွညျနယျတို့တှငျ တိမျအသငျ့အတငျ့ ဖွဈထှနျးမညျ..။
မွနျမာ့ပငျလယျပွငျ။ လှိုငျးအသငျ့အတငျ့ရှိမညျ။ လှိုငျး အမွငျ့မှာ မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတို့တှငျ (၅)ပမှေ (၇)ပေ ခနျ့ ရှိနိုငျပါသညျ
နောကျ(၂)ရကျအတှကျခနျ့မှနျးခကျြ။ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရနျကုနျ တိုငျးဒသေကွီး၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကရငျ ပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့တှငျ နရောကှကျကြား မိုးထဈခြုနျးရှာမညျ..။
တိမျအသငျ့အတငျ့ ဖွဈထှနျးမညျ။ရနျကုနျမွို့နှငျ့အနီးတဈဝိုကျ အတှကျမနကျဖွနျနံနကျအထိခနျ့မှနျးခကျြ။ တိမျအသငျ့အတငျ့ ဖွဈထှနျးမညျ..။
မန်တလေးမွို့နှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျမနကျဖွနျနံနကျအထိ ခနျ့မှနျးခကျြ။ နရောကှကျကြား မိုးထဈခြုနျးရှာနိုငျပါသညျ။ ရှာရနျရာနှုနျး(၆၀) ဖွဈပါသညျ ။
လာမညျ့စနေ၊ တနင်ျဂနှေ အားလပျရကျမြားအတှကျ မိုးလဝေသ ခနျ့မှနျးခကျြ။ နပွေညျတျောတှငျ တိမျအသငျ့အတငျ့ ဖွဈထှနျးပွီး၊ မန်တလေးတိုငျး ဒသေကွီးနှငျ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတို့တှငျ နရောကှကျကြား မိုးထဈခြုနျးရှာနိုငျပါသညျ ။
လူတစ်ယောက် ၏ ပင်ကိုယ် စရိုက်တွက် ကြည့်နည်း
ကိုဗစ်ဟာ လေထဲ ကနေ ကူးတယ် လို့ အမေရိကန် က ကြေညာ လိုက်ပါပြီ သတိရှိကြပါ